Doorashaddii Dalka Uk Oo Dumarka Iyo Dadka Laga Tiradda Badan yahay Saami Weyn Ka Heleen | Duul News International
Doorashaddii Dalka Uk Oo Dumarka Iyo Dadka Laga Tiradda Badan yahay Saami Weyn Ka Heleen	(Duulnews)-Doorashadii UK ee lagu kala baxay bishan May 7dii waxa ku soo baxay tiradii ugu badnayd ee haweena ee abid ee loo soo doorto golaha wakiilada UK.
Tirada guud kuraasta golaha wakiilada UK waa 650 kursi, waxaana dhaqan u ahayd in in kabdan 500 ay rag noqdaa kuwo loo soo doorto, hase ahaatee doorkan waxa doorashadani wax ka badashay ragii ku koobnaa, waxana soo baxay tiro dumar ah oo kor dhiyey tii hore ee dumarku ku lahaayeen aqalka wakiilad.
Doorashadii hore haweenku waxa ay ku lahaayeen 143 xubnood, doorkanse waxa ay ku lee yihiin 191 xubnood, taas oo ka dhigaysa 29%. Kordhka tirada haweenka ku soo biiray waxa lagu sheegay haweenka oo aad uga qayb qaatay ololaha iyo saamaynta guud ee siyaasada UK.
Haweenay la yidhaa Zaz Khan oo hore ugu ololayn jirtay dadka qaba xanuunka dhinbirka oo asalkeedu yahay Baakistaaniyad ayaa loolan adag ka dib wax ay kala wareegtay kursigii hore loogu soo doortay George Galloway oo ah shaqsi aad looga yaqaab UK iyo wadamo badan oo si weyn uga soo horjeeda Isreal iyo taageerayaashooda. Haweenaydan oo ka sharaxnayd xisbiga Shaqaalaha (Labour) ee West Bradford -England, ayaa waxa ay ka mid tahay haweenka kala duwan ee doorashadan ku xoo baxay ee dhigay wacadaro aan la filayn in ay guul u soo hoyso.
Dadka laga tirada badan yahay ee madowga, ama Eeshiyaanka iyo kuwa iska dhalka ah ayaa waxa doorashadan sidoo kale ku soo baxay tiradii ugu badayd ee abid ay ku yeeshaan golaha wakiilada ee UK. Waxaana doorashadan ku soo baxay 42 xubnood oo ay ku jiraan 27 hore ugu soo baxay doorashadii sanadkii 2010kii.
Marka la eego doorashadan waxa ahayd mid dhan ay ka dabaaldagayaan dadka taageera in ay haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ay ku bataan galista baarlamanka.
Dadka Soomaalida ayaan jirin cid isku soo sharxday doorashada baarlamanka, waayo heer kaa ma gaadhin bulshada ay ku xushaan xisbiyadu qof Soomaali ah, hase ahaatee golayaasha deegaanka ayey in badani ka iska soo sharaxeen, ilaa haddana lama hubo inta ku guulaystay tiradooda, waxase ku jira haween sidoo kale.